2 Madzimambo 9 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Madzimambo 9:1-37
9 Zvino muprofita Erisha akashevedza mumwe wevanakomana+ vevaprofita, akabva ati kwaari: “Zvisunge muchiuno,+ utore chinu+ ichi chemafuta, uende kuRamoti-giriyedhi.+ 2 Kana wasvika ikoko, utsvake Jehu+ mwanakomana waJehoshafati mwanakomana waNimshi ikoko; uye upinde, womusimudza pakati pehama dzake, wopinda naye muimba yomukatikati.+ 3 Utore chinu chemafuta, uadururire mumusoro make+ uti, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndakuzodza+ kuti uve mambo+ waIsraeri.”’ Iwe uvhure suo, utize uye usamira.” 4 Zvino mushandi wacho, mushandi womuprofita, akaenda kuRamoti-giriyedhi. 5 Paakasvika, akaona vakuru veuto rehondo vakagara. Akabva ati: “Haiwa imi mukuru wangu, ndine shoko renyu.”+ Jehu akati: “Raani pakati pedu tose?” Iye akabva ati: “Renyu imi, haiwa mukuru wangu.” 6 Naizvozvo akasimuka, akapinda mumba; uye iye akadururira mafuta mumusoro make, akati kwaari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Ndakuzodza kuti uve mambo+ wevanhu vaJehovha,+ ivo vaIsraeri. 7 Unofanira kuuraya imba yaAhabhi ishe wako, uye ndichatsiva+ ropa revashumiri vangu vaprofita neropa revashumiri vaJehovha vose riri muruoko rwaJezebheri.+ 8 Imba yose yaAhabhi+ ichaparara; uye ndichaparadza munhurume+ wose asina mubatsiri neanoda kubatsirwa uye chero ani zvake asina zvaanobatsira+ waAhabhi pakati paIsraeri. 9 Ndichaita kuti imba yaAhabhi ive seimba yaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, uye ive seimba yaBhaasha+ mwanakomana waAhija. 10 Imbwa dzichadyira+ Jezebheri muchikamu chomunda chiri kuJezreeri, uye hapana anozomuviga.’” Naizvozvo akavhura suo, akatiza.+ 11 Zvino Jehu akabuda, akaenda kuvashandi vashe wake, ivo vakati kwaari: “Kwakanaka here?+ Benzi+ iri ravingei kwauri?” Asi iye akati kwavari: “Imi munonyatsoziva murume wacho uye matauriro ake.” 12 Asi ivo vakati: “Inhema! Tapota, tiudze.” Akabva ati: “Ataura neni izvi neizvo, achiti, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndakuzodza kuti uve mambo waIsraeri.”’”+ 13 Mumwe nomumwe akabva akurumidza kutora nguo+ yake, akaiisa pasi pake pamusoro pematanho chaipo, vakaridza hwamanda+ vachiti: “Jehu ava mambo!”+ 14 Jehu+ mwanakomana waJehoshafati mwanakomana waNimshi+ akamukira+ Jehoramu. Zvino Jehoramu akanga akarinda kuRamoti-giriyedhi,+ iye nevaIsraeri vose, nokuda kwaHazaeri+ mambo weSiriya. 15 Gare gare mambo Jehoramu+ akadzoka kuJezreeri+ kuti arapwe maronda aakanga akuvadzwa nevaSiriya paakarwa naHazaeri mambo weSiriya.+ Zvino Jehu akati: “Kana mweya yenyu ichida,+ musarega chero munhu upi zvake achitiza muguta kuti anosvitsa mashoko kuJezreeri.” 16 Jehu akakwira mungoro, akaenda kuJezreeri; nokuti Jehoramu akanga akarara ikoko, uye Ahaziya+ mambo waJudha akanga aenda kunoona Jehoramu. 17 Murindi+ akanga akamira pashongwe+ iri muJezreeri,+ akaona boka revarume vaJehu raiti nyandu nyandu sezvaakanga achiuya, akabva ati: “Kune boka revarume riri kuti nyandu nyandu randiri kuona.” Jehoramu akati: “Tora murwi akatasva bhiza, umutume kuti anosangana navo, ati, ‘Kune rugare here?’”+ 18 Naizvozvo mutasvi akanga akatasva bhiza akaenda kunosangana naye akati: “Zvanzi namambo, ‘Kune rugare here?’” Asi Jehu akati: “Unei no‘rugare’?+ Enda shure kwangu!” Murindi+ wacho akataura achiti: “Nhume yacho yasvika kwavari, asi haina kudzoka.” 19 Naizvozvo akatuma mutasvi wechipiri akanga akatasva bhiza, uyo akati achisvika kwavari, akati: “Zvanzi namambo, ‘Kune rugare here?’”+ Asi Jehu akati: “Unei no‘rugare’? Enda shure kwangu!” 20 Murindi wacho akataura achiti: “Asvika kwavari, asi haana kudzoka; uye kutyaira kwacho kwakaita sokutyaira kwaJehu+ muzukuru waNimshi,+ nokuti anotyaira somunhu anopenga.”+ 21 Jehoramu akati: “Sungai ngoro!”+ Naizvozvo ngoro yake yehondo yakasungwa, Jehoramu mambo waIsraeri naAhaziya+ mambo waJudha vakabuda, mumwe nomumwe ari mungoro yake yehondo. Sezvavakaramba vachienda kunosangana naJehu, vakamuwana muchikamu chomunda waNabhoti+ muJezreeri. 22 Zvino Jehoramu paakangoona Jehu, akabva ati: “Kune rugare here nhai Jehu?” Asi iye akati: “Kungava norugare rwei+ kana ufeve hwaJezebheri+ amai vako nouroyi+ hwavo huzhinji zvichiripo?” 23 Jehoramu akabva adzosa ngoro nemaoko ake kuti atize, akati kuna Ahaziya: “Ahaziya, tanyengerwa!”+ 24 Jehu akakunga uta+ hwake kwazvo, akapfura Jehoramu pakati pemapendekete, zvokuti museve wakabuda nepamwoyo wake, akawira mungoro yake yehondo.+ 25 Zvino akati kuna Bhidkari mubatsiri+ wake: “Musimudze; mukande muchikamu chomunda waNabhoti muJezreeri;+ nokuti yeuka kuti: Ini newe takanga tichifambisa ngoro dzaiva nemabhiza maviri maviri tichitevera baba vake Ahabhi, uye Jehovha akataura chirevo+ ichi pamusoro pake: 26 ‘“Chokwadi nezuro ndakaona ropa+ raNabhoti neropa revanakomana vake,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “uye ndichakutsiva+ muchikamu chino chomunda,” ndizvo zvinotaura Jehovha.’ Naizvozvo, musimudze; mukande muchikamu chomunda maererano neshoko raJehovha.”+ 27 Zvino Ahaziya+ mambo waJudha akazviona, akatiza nenzira yokumunda wamambo.+ (Gare gare Jehu akamutevera akati: “Naiyewo! Mubayei!” Naizvozvo vakamubaya ari mungoro yake panzira inoenda kuGuri, iri pedyo neIbreyamu.+ Iye akaramba achitizira kuMegidho,+ akanofira ikoko.+ 28 Vashandi vake vakabva vamutakura ari mungoro vakaenda kuJerusarema, vakamuviga muguva rake pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi.+ 29 Ahaziya+ akanga ava mambo waJudha mugore rechigumi nerimwe raJehoramu+ mwanakomana waAhabhi.) 30 Jehu akazosvika kuJezreeri,+ Jezebheri+ akazvinzwa. Uye akapenda+ maziso ake nezvizoro zvitema, akagadzira musoro wake zvakanaka,+ akatarira pasi nepahwindo.+ 31 Jehu akapinda nepagedhi. Zvino Jezebheri akati: “Zvafambira zvakanaka Zimri+ muurayi washe wake here?” 32 Jehu akatarira kumusoro kuhwindo racho akati: “Ndiani ari kurutivi rwangu? Ndiani?”+ Machinda+ maviri kana kuti matatu akabva atarira pasi kwaari. 33 Naizvozvo akati: “Mudonhedzei!”+ Vakabva vamudonhedza, rimwe ropa rake rikachambwadzira pamadziro nepamabhiza; iye akabva amutsika-tsika.+ 34 Akazopinda mukati, akadya, akanwa akabva ati: “Ndapota, tarisirai uyu akatukwa+ mumuvige, nokuti iye mwanasikana wamambo.”+ 35 Pavakaenda kunomuviga, havana chavakawana kunze kwedehenya netsoka nezvanza zvemaoko ake.+ 36 Pavakadzoka vakamuudza, iye akati: “Ishoko raJehovha raakataura achishandisa+ mushumiri wake Erisha muTishbhi, achiti, ‘Imbwa dzichadyira nyama yaJezebheri muchikamu chomunda wokuJezreeri.+ 37 Chitunha chaJezebheri chichava mupfudze+ mumunda uri muchikamu chenyika yeJezreeri, kuti varege kuzoti: “Uyu ndiye Jezebheri.”’”+
2 Madzimambo 9